Doorasho adag oo Maanta ka dhaceysaa Magaalada Beledweyne | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Doorasho adag oo Maanta ka dhaceysaa Magaalada Beledweyne
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad Goboleed ee Maamulka Hir-Shabeelle ayaa Maanta Magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan ku qabanaya doorashada laba kursi oo uu mid kamid ah ah doorashadiisa adag tahay.
Labada kursi ayaa waxaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku kala fadhiyay siyaasiyiin saameyn ku leh degaannada Hir-Shabeelle, waxaana kuraasta doorashadooda la qabanayo iyo musharrixiinta ku tartamaya ay kala yihiin.
1: Kursiga Hop#063 oo ay ku tartami doonaan Cabdullaahi Goodax Barre Wasiirkii hore ee Waxbarashada oo kursigaan ku fadhiya iyo 9 musharrax oo kale oo ay kujiraan, Xoghayaha Maamulka G/ Banaadir Xiireey, Xildhibaan hore Ibraahim Xabeeb iyo musharrixiin kale.
2: Kursiga labaad ee Hop#011 ayaa waxaa ku tartami doona Wasiirkii hore ee Wasaaradda Amniga Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo kursigaan ku fadhiya iyo Maxamed Cumar Maxamed.
Maamulka Hir-Shabeelle ayaa weli doorashadw kuraas kamid ah Golaha Shacabka waxaa ay uga harsan tahay Magaaloyinka Beledweyne iyo Jowhar, waxaana la filayaa in Maalmaha soo socda la soo geba-gabeeyo doorashadooda.
Doorasho adag oo Maanta ka dhaceysaa Magaalada Beledweyne was last modified: March 22nd, 2022 by warsan radio
Dhageyso;- Barnaamijka Arimaha Caalamaka